Corporate Mandala Ny Fitaovana Fanabeazana Sy Fanofanana - Famolavolana
Ny Fitaovana Fanabeazana Sy Fanofanana
Ny Fitaovana Fanabeazana Sy Fanofanana Corporate mandala dia marika vaovao fanabeazana sy fampiofanana vaovao. Izy io dia fampidirana vaovao sy mampiavaka ny foto-kevitra mandala taloha sy ny maha-izy azy orinasa natao mba hanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fanatontosana orinasa amin'ny ankapobeny. Ankoatra izany dia singa vaovao amin'ny maha-orinasa orinasa. Ny mandala Corporate dia hetsika vondrona iray ho an'ny ekipa na ny hetsika manokana ataon'ny mpitantana. Namboarina manokana ho an'ny orinasa manokana izy io ary miloko na ekipa tsirairay amin'ny fomba maimaim-poana sy intuitive izay ahafahan'ny tsirairay mifidy loko na saha rehetra.
Anaran'ny tetikasa : Corporate Mandala, Anaran'ny mpamorona : Pavol Rozloznik, Anaran'ny mpanjifa : KOMUNIKACIA.
Ny Fitaovana Fanabeazana Sy Fanofanana Pavol Rozloznik Corporate Mandala